Mashiinka Baakadaha Thermoforming, Mashiinka Baakada Vacuum - Utien Pack
Utien Pack Co., Ltd. Waxaa loo yaqaan Utien Pack waa shirkad farsamo oo ujeedadeedu tahay soo saarista khadka baakadaha oo aad u otomaatig ah. Alaabtayada muhiimka ah ee hadda jira waxay daboolayaan alaabooyin badan oo ka sarreeya warshadaha kala duwan sida cuntada, kiimikada, elektaroonigga, dawooyinka iyo kiimikooyinka guryaha. Utien Pack waxaa la aasaasay 1994 wuxuuna noqday sumcad caan ah illaa 20 sano horumarkooda. Waxaan kaqeyb qaadanay qabyo qoraalka 4 heer qaran ee mashiinka wax lagu raro. Intaa waxaa dheer, waxaan helnay 40 tiknoolajiyad patent ah alaabtayada waxaa lagu soo saaray hoosta ISO9001: shuruudaha shahaadada 2008. Waxaan dhiseynaa mashiinno wax lagu rakibo oo tayo sare leh waxaanna nolol fiican ugu sameynaa qof walba oo isticmaalaya tignoolajiyada baakadka aaminka ah Waxaan bixinaynaa xalal si loo sameeyo xirmo wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan.
La aasaasay 1994
In ka badan 25 Sano oo Khibrad ah
In ka badan 40 Teknolojiyad patent ah
Aan Cunto Ahayn
Mashiinada Thermoforming, ee alaabooyinka kala duwan, waa ikhtiyaari in lagu sameeyo mashiinnada filimka adag ee MAP (Qalabka wax lagu beddelay ee Isbeddelka ah), mashiinnada filim jilicsan ee leh faakuum ama mararka qaarkood MAP, ama VSP (Baakadaha Maqaarka Vacuum).
Shaabad ku dheji
Shaabadeeyaha shaashadda ah ee soo saara baakadaha MAP ama baakadaha VSP ee ka soo baxa baakidhyo horay loo soo farsameeyay oo baakadeyn kara badeecooyin cunto cusub, qaboojiye ah, ama barafoobay heerar kala duwan oo soo saar ah
Mashiinnada faakiyuhu waa nooca ugu badan ee mashiinnada baakadaha lagu rakibo ee loogu talagalay codsiyada iyo maaraynta kiimikada. Mashiinnada wax lagu rakibo ee Vacuum-ka waxay ka saaraan xirmada oksijiin hawo ah ka dibna xirxiraan xirmada.
Xiinka Tubta Xiinka
Ka duwan kuleylka kuleylka, xirxiraha tuubada ultrasonic waxay isticmaashaa tikniyoolajiyadda ultrasonic si ay awood ugu yeelaan molecules dusha sare ee tuubooyinka in si wadajir ah laysugu daro iyadoo la adeegsanayo khilaafka ultrasonic. Wuxuu isku daraa rakibaadda tuubada otomaatiga, hagaajinta booska, buuxinta, xiritaanka iyo goynta.
Cadaadis xoog leh, Mashiinka wax lagu duubo ee Compress ayaa inta badan hawada ku jira bacda ka dibna xira. Waxaa si ballaaran loo dalbaday in lagu xiro alaabada wax lagu shubo, maadaama ay waxtar leedahay in la yareeyo ugu yaraan 50% boos.
Mashiinkaani wuxuu ku saleysan yahay tikniyoolajiyadda daboolida kuleylka. Calanka PVC waxaa lagu kululeeyaa labada dhinacba isla markaana wadajir ayaa loo wada saarayaa iyadoo cadaadis sarreeya la saarayo. Shaabadu waa toosan tahay waana siman tahay.
MAXWELL baakadaha miraha la qalajiyey
MAXWELL, oo ​​ah shirkad caan ku ah soo saarida miraha la qalajiyey sida yicibta, sabiibta iyo jujube qalalan ee Australia. Waxaan u qaabeynay khad xirmo oo dhameystiran oo ka sameysan xirmo wareegsan, miisaanka otomaatiga, buuxinta otomaatiga, faakuumka & wasaqda gaaska, goynta, daboolka otomaatiga iyo calaamadeynta otomaatiga. Sidoo kale t ...
Baakadaha Kanadiga ah
Mashiinka baakadaha ee soo saaraha rootiga Kanadiyaanka ah wuxuu ka weyn yahay balac dhan 700mm iyo 500mm horay u sii sameynta. Baaxadda weyn waxay keenaysaa codsi sare oo ku saabsan mashiinka kuleylka iyo buuxinta. Waxaan u baahanahay inaan hubinno xitaa cadaadis iyo awood kuleylineed oo xasilloon si loo gaaro heer sare